China A Poetic Journey – A Njem Qiandao Lake na-emepụta na ndị na - eweta ngwaahịa | Mia okike
A Poet Journey – A Journey na Qiandao Lake
Na October 17th, ndị ọrụ ibe si ngalaba azụmaahịa mbụ dị njikere ịga Ọdọ Mmiri Qiandao mara mma, oge awa obi ụtọ na-amalite!
Ihu igwe n’ụbọchị ahụ na-enye ume ọhụrụ, ma ọmarịcha ụzọ ya dịkwa mma. Ahịhịa ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ na ụlọ dị iche iche dị anya guzobere ihe osise nkịtị na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ, nke mere ka ndị mmadụ nwee mmetụta ka mma.
N'ime ọchị ahụ, n'ụzọ, ihe karịrị awa abụọ ịkwọ ụgbọala, onye ọ bụla mechara rute n'obodo nta ahụ edeburu akwụkwọ. Obodo a dị n’akụkụ ọmarịcha Ọdọ Mmiri Qiandao. Mepee windo ahụ ma ị nwere ike ịhụ echiche dị n'èzí, na-eku ume ikuku, ma saa mkpụrụ obi gị. Enwere swings, slides, DIY mud na ebe ntụrụndụ ndị ọzọ n'èzí, ụmụaka na-ekpori ndụ
N'ehihie mbụ nke njem ahụ bụ ama Tianyu Observation Deck. Osisi Tianyu Observation dị na Ugwu Tianyu. Ugwu adighi elu. Elu ala dị n’agbata mita 235 na 310. Ọ bụ ikpo okwu ikiri kacha mma maka ọdọ mmiri Qiandao. Mgbe ọ rụsịrị nke ọma n’elu, na-eguzo n’elu ebe a na-ekiri ya n’elu Ugwu Tianyu, o nwere ike “ịdị n’elu ugwu ahụ ma na-ele ugwu anya”. Ebe a na-ekiri ihe dị elu n'elu ugwu ahụ, nke nwere echiche sara mbara na panoramic nke ọdịdị gbara ya gburugburu, iyi na-adịghị agwụ agwụ nke Qiandao Lake Bridge, ọwụwa anyanwụ kachasị mma nke Qiandao Lake, na ọdọ mmiri a pụrụ iche na ugwu ugwu.
Nke abụọ kwụsị-Hongye Bay.
Hongye Bay dị na Mpaghara Pingfeng dị na ọdọ mmiri dị n’etiti ọdọ mmiri Qiandao Lake Scenic. Ọ dị n’etiti Xiaojinshan Peninsula na Jinxian Islands, nke a na-akpọkarị Xiaojinshan. Ọkwa dị na mmiri dị ka enyo, ọdọ mmiri ahụ doro anya na-acha anụnụ anụnụ, ntụgharị uche nke ugwu na oke ọhịa dịkwa ọkụ ma na-enwu gbaa; agwaetiti ahụ kwụ ọtọ ma kwụ ọtọ, ala ahụ jupụtakwara na ọnụ ọnụ, ndagwurugwu, na mkpọda ugwu, a na-akpọkwa ya mmiri
N’amaghị ama, oge ruru ná mgbede, na mbara igwe na-agba. Onye ọ bụla laghachiri n'ime obodo, ma ndụ abalị na-eji obi ụtọ malitere!
Onye ọ bụla gbakọtara na sofa iji lee egwuregwu, ntụrụndụ na nri, nke dị mma n'abalị a mmiri ozuzo.
N’oge na-adịbeghị anya, a na-enyocha ihe nkiri “My Meeti na Me” na mba niile. N'ime ha, Fuwen Township Primary School nwere ụlọ ugegbe nwere ọmalịcha masịrị ndị obodo niile. Nke a bụ ebe anyị na-aga n’echi ya.
Lọ egwurugwu dị n'ugwu na-ezobe nrọ akụkọ nwata. Agba 26 jikọtara ọnụ. Glasslọ ugegbe ahụ dị n’ihu gị abụrụla ebe obibi nke akụkọ ifo. A na-ese iko ndị na-egbuke egbuke na agba agba. Underlọ dị n'okpuru igwe na-acha anụnụ anụnụ na-enwu gbaa ma mara mma. Kpoo igwe ojii na-acha ọcha, hapụ osisi ndị na-acha akwụkwọ ndụ iji soro ha.
Borderkè ahụ na-acha ọcha na-akọwapụta ụlọ ndị ahụ na ụlọ ndị a tụkọtara ọnụ na-abụkarị nkà. Nnụnụ ahụ na-eguzo na ngere, na-agba Roses na-eji nwayọ arịgoro ụgbọ elu ahụ. Ifuru gbara ụlọ akwụkwọ elementrị. Akuku obodo di mma. Ghọọ obere ogige.
Mgbe m na-ele anya na ọnụ ọgụgụ ahụ dị n’ala, ọ gbatịrị wee mechaa dị mkpụmkpụ, na-echeta oge m dị afọ iri na ụma, ọ bịara bụrụ nke enweghị nchekasị, ụda nke “Nwatakịrị nwoke” wee nụ na ntị m, nke dabara adaba maka ebe.
N'ime ahịhịa rọba, ahịhịa ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-acha ụbịa mgbụsị akwụkwọ, obere osmanthus wee too n'elu osisi. Mgbe ikuku feburu, na-esi ísì ụtọ bara nnukwu uru nke obi. Agba ụbịa nke ogige ahụ jupụtara, enweghị ike imechi mgbidi ahụ. N'elu mgbidi ụlọ akwụkwọ ahụ, e nwere ihe osise ndị aka aka na-egosipụta mma mara mma ma zoo ụmụaka aka ha dị ọcha nke ndị okenye.
Iberibe ogwe acrylic mara mma nwekwara ike ịmepụta ezigbo ụlọ akwụkwọ n'ime obi gị. Saysnye na-ekwu na nrọ nwere ike ịbụ naanị nrọ. Mgbe nrọ pụtara ihe n’eziokwu, ha na-achọpụta na ụwa nwere ike maa mma karịa.
Aka na ọnụ ụzọ na windo, okpomọkụ nke ọkụ na-ahapụ n’ime iko ahụ, na onyinyo ndị dị na windo ndị ahụ na-enwu enwu, a na-ewelite akụkụ ọnụ, ụwa dịkwa ebube karịa.
Njem obi a toụrị na Qiandao Lake agwụla na njedebe. Njem a abughi nani na eme ka mmekorita di n'etiti ndi otu ngalaba, kamakwa nye onye obula ohere iji obi di nma nabata oru ozo. Ka anyị gaa n'ihu na-arụsi ọrụ ike ma na-aga n'ihu njem obi ụtọ n'afọ ọzọ